Antenimierandoholona :: Voaongana ny loholona Fernand Jeannot, TIM teo aloha lasa kandidan’ny IRD • AoRaha
Antenimierandoholona Voaongana ny loholona Fernand Jeannot, TIM teo aloha lasa kandidan’ny IRD
Tsy nahavita ny fotoam-piasany. Navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), omaly, ny didy manambara amin’ny fomba ofisialy ny fanonganana eo amin’ny toerany ny loholona Fernand Jeannot, nisolo tena ny antoko Tim eo anivon’ny Antenimieran- doholona. Fitoriana miisa telo napetraky ny filohan’ny Antenimierandoholona Rakotovao Rivo no novalian’ny HCC, omaly.
Ny voalohany amin’ izany dia ny fanamarinana ny fahabangan-toeran’ity loholona ity ao amin’ny lapan’ Anosikely. Ny faharoa dia ny fanalana azy eo amin’ny toerany ary ny fanoloana ny toeran’ny loholona Fernand Jeannot.
Neken’ny HCC avokoa ireo fitoriana napetraky ny filohan’ny Antenimierandoholona ireo. “Azo raisina sady mitombina ny fitoriana fangatahana ny fanonganana ny loholona Fernand Jeannot. Voamarina ny fahabangan-toerana ary ambara ny fanalana ny loholona eo amin’ny toerany. Hisolo ny toerany ny kandidàn’ny antoko Tim Mahaliny”, hoy ny fanapahana navoakan’ny HCC.
Antony nahatonga ny fitoriana nataon’ny filohan’ ny Antenimierandoholona sy niteraka an’izao fanapahan-kevitra navoakan’ny HCC izao ny fivadihana palitao nataon’io loholona avy amin’ ny antoko Tim io. Lasa kandidà depiote natolotry ny vondrona politika « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » (Ird) izy izao voaongana izao. “Ny fialany tao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim) ka nivadihany tao anatin’ny antoko hafa hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka dia mandika ny andininy faha-72 ao amin’ny Lalàm-panorenana”, araka ny fanazavana noentin’ny HCC.
Voafaritra ao amin’ity andininy ity fa tsy azon’olom-boafidy atao ny mivadika antoko politika hafa ankoatra ny antoko politika nahalany azy tamin’ny fifidianana natrehany. Midika ho fanonganana azy avy hatrany eo amin’ny toerany izany, araka ny fanampim-panazavan’ ny HCC hatrany.